चीनले वार्ता भन्दै षड्यन्त्र गरिरहेको भारतको आरोप, एलएसीमा ठूलो संख्यामा चिनियाँ सेना::Best Online News Portal of Nepal
चीनले वार्ता भन्दै षड्यन्त्र गरिरहेको भारतको आरोप, एलएसीमा ठूलो संख्यामा चिनियाँ सेना
एजेन्सी। सीमामा चीनको पछिल्लो गतिबिधीले वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा तनाव बढाएको भारतले आरोप लगाएको छ। भारतीय मिडिया रिपोर्टका अनुसार चीनले वार्ताको टेबुलमा शान्तिको बहाना गरिरहेको छ र लगातार षडयन्त्र गरिरहेको छ।
यसै कारणले लद्दाखमा तनाव बढिरहेको छ र युद्धको सम्भावना पनि देखिन सक्छ। चीनले अचानक एलएसीमा सेनाको संख्यामा अभूतपूर्व वृद्धि गर्न थालेको छ। पेङगोङ तालको उत्तरी तर्फबाट चिनियाँ सेनाले सक्रियता बढाएको छ ।
उत्तरी किनारमा फिंगर क्षेत्रको रेजलाइनमा ठूलो संख्यामा चिनियाँ सैनिकहरू भेला हुँदैछन्।
सेप्टेम्बर ७ मा दक्षिणी किनारमा घुसपैठ गर्ने प्रयास असफल भएपछि चिनियाँ सैनिकहरूको भेला भइरहेको छ। चिनियाँ सेना (पीएलए) को गतिविधि बुधवार साँझ देखि लद्दाख क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ।
चीनले सिमानामा पठार क्षेत्रहरूमा सैन्य उपकरणको आवत बढाइरहेको छ। चीनले देशका विभिन्न भागबाट हतियार र अन्य सैन्य उपकरणहरू सोर्स गर्दैछ। दुई देशका सेनाहरु एक अर्काको धेरै नजिक छन्। लद्दाख क्षेत्रको कालो शीर्ष र वास्तविक नियन्त्रण रेखा सहित धेरै रणनीतिक मोर्चामा नेतृत्व लिइसकेपछि चीन प्रायः नियन्त्रणबाट बाहिर जान्छ।
एलएसी पार गर्न प्रयास गर्दै २९ देखी ३० अगस्त देखि ८ सेप्टेम्बरको रातदेखि धेरै असफल प्रयासहरू भएका छन्। विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि जुन परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ, दुवै देशहरू बीचको युद्धको चिनारी जुनसुकै बेला पनि साना उत्तेजनामार्फत हुन सक्छ।
विशेषज्ञहरूले यसको लागि केहि कारणहरू दिएका छन्। १९६२ पछि एलएसीको अवस्था अझ गम्भीर भएको छ। ४५ बर्ष पुरानो सम्झौता भंग भएको छ। पूर्वी लद्दाखमा भारतीय सेनाको बलियो प्रवेशद्वारा चीन पूर्ण रूपमा अभिभूत भइसकेको छ।
यही कारण हो कि चीनले दोस्रो मोर्चा खोल्न बढी हतियार दिएर पाकिस्तानलाई मजबुत गरिरहेको छ।
पेङगोङ तालको दक्षिणी भागबाट चिनियाँ सेनालाई भगाएको भारतीय पक्षको दाबी
चीनद्वारा गलवान भीडन्तमा आफ्ना सैनिक मारिएको ९४ दिनपछि स्वीकार !
लद्दाखमा भारतीय सेनाको ‘अपरेशन हिउँ चितुवा’ पछि चीन आत्तिएको दाबी
के चीनको पीएलएलाई भारतको एसएफएफले टक्कर दिन सक्छ ? १९६२ मा चीनसँग हारेपछि भारतमा ‘गुप्त सेना’ गठन
चिनियाँ सेनाले जासुस भन्दै कब्जामा लिएर रिहा भएका पाँच भारतीय को हुन ?
चिनियाँ सेनाले ‘जासूस’ भन्दै कब्जामा लिएका पाँच तिब्बती मुलका भारतीय नागरिक रिहा
ग्लोबल टाइम्स लेख्छ – लडाईं क्षमतामा चीनको सैन्य शक्ति भारतको भन्दा निकै शक्तिशाली
मोदीले अपनाए लद्दाखमा उग्र राष्ट्रबाद, असफलतालाई ढाकछोप गर्न चीनसँगको बिबादलाई उचाले
भारतमा ‘मेड इन चाइना’का सामानको बिक्री बन्दपछि चीनले ल्यायो यस्तो अफर
सुशान्तबारे बिहारका मन्त्रीको खुलासा – दुबईबाट अन्डरवर्ल्डले इशारा दिएपछि फिल्म उद्योगमा घटना घट्छ
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङले किन माफी मागे ?
उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा गर्न गृहकाे सहमति
बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा ७२ वर्षीय पुरूषकाे मृत्यु